Onye ndu njem nleta na Zimbabwe apụla na Chaos na-esote: Akwụkwọ nke akwụkwọ arụkwaghịm
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Onye ndu njem nleta na Zimbabwe apụla na Chaos na-esote: Akwụkwọ nke akwụkwọ arụkwaghịm
Na-agbasa News Travel • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zimbabwe
Zimbabwe njem nleta dị ka ọ na-adaba na ọnọdụ ọgba aghara. Mịnịsta na-ahụ maka njem nleta Prisca Mupfumira nọ n'ụlọ mkpọrọ ma na-eche ihu n'ụlọ mkpọrọ afọ 40. Onye isi oche ndị isi na onye njem na Zimbabwe Tourism Authority (ZTA), Mr Osbourne Majuru gbara arụkwaghịm na-ekwu maka nnyonye anya na ọchịchị ọjọọ site n'aka onye isi nchịkwa isi. Na mgbakwunye, onye otu ndị ZTA Precious Nyika rịgoro n’ọkwa.
Majuru kpughere na akwụkwọ ozi arụkwaghịm nke ọ gbara na 12 July 2019 nye Mịnịsta nke gburugburu, njem na njem nleta, Priscah Mupfumira, nọ n'ụlọ mkpọrọ ugbu a, na onye isi oche ZTA, Ms Rita Likukuma emeela ka ndị isi ọrụ ahụ ghara ịrụ ọrụ nke ọma.
Taa onye otu ọzọ na-ahụ maka njem nlegharị anya na Zimbabwe, Precious Nyika, agbaala arụkwaghịm n'ọrụ arụkwaghịm nke onye isi oche ndị isi oche Osborne Majuru na nso nso a.
eTN nwetara akwukwo nke onye isi oche onye isi oche na ndi isi njem nke Zimbabwe Tourism Authority (ZTA), Mazị Osbourne Majuru degara onye ozi ahụ na July 12.
Senator maka Makonde, Priscah Mupfumira dị ebube
Onye Minista nke Gburugburu Ebe Obibi na Ile Ọbịa
Flolọ nke 12, Buildinglọ Kaguvi
Nkuku 4th Street na Central Avenue
Ezigbo Mịnịsta ala
AH RR AS D AS KA ZIMBABWE TOURISM BOARD CHAIRMAN
Ọ na-ewute m nke ukwuu na m na-edetara gị ndụmọdụ banyere arụkwaghịm m dị ka Director na Onye isi oche nke Board of Tourism Authority Board. Akwado m na-arụ ọrụ ozugbo. Isi ihe kpatara m ji gbaa arụkwaghịm bụ na enwere m obi eziokwu na ikike nke ikike nke Board emebiwo n'ụzọ ihe n'ụzọ kachasị na-esote nhọpụta onye isi nchịkwa, Oriakụ Rita Likukuma. Nkebi nke 17.4 nke Zimbabwe Tourism Act kwuru n'ụzọ doro anya na Onye isi Ọrụ Ndị Ọrụ n'okpuru iwu na nlekọta nke ndị Board. Nkebi nke 18 gara n'ihu na "Board (ọ bụghị Chief Executive) na-akọrọ Mịnịsta gbasara ọrụ, ọrụ na ọrụ nke Authority…. “.
Nkebi nke 20 na-enyekwa na Mịnịsta nwere ike inye ndị Kọmitii (ọ bụghị ndị isi Executive) ntụzi aka n'ihe gbasara Iwu (ọ bụghị ihe gbasara ọrụ) dịka o chere na ọ dabara.
Ndokwa a rụrụ ọrụ nke ọma mgbe Dr Karikoga Kaseke nọ n'ọfịs mana ọ dị mwute na ihe gbanwere mgbe ọ ghọrọ onye ọrịa na-arịa ọrịa. Honuorable Minista m na-eche bụ na ikike nke ZTA Board emebila ma mebie nke ukwuu nke na ọ ga-eme ka ndị ọrụ na-adịghị arụ ọrụ.
Acting CE anaghịzi anata ntụziaka site n'aka ndị Board mana site na ụlọ ọrụ gị. Ihe oru nyocha ihe nyocha na-aga n'ihu bụ ihe atụ. Ndị ọrụ gị nyere iwu njikwa na mmekọrịta mbụ ya na Meikles Hotel (na-esote oge a kara aka) iji nyefee nyocha nka. Anyị kwughachiri ọnọdụ a na inaugural Strategy Retreat na nzukọ nzukọ ndị ọzọ.
O juru m anya mgbe Omume CE nyere ndị otu nọ n'ihe na-erughị awa 48 ka ha kwuo ihe ha kwuru na Nsonaazụ Nyocha Akwukwo sitere n'aka ndị na-ahụ maka ndụmọdụ site na gburugburu n'ihi na ọ dị mkpa ịkọ akụkọ maka Minista (ọrụ Board). Ndị Board echerela maka nyocha a maka nyocha a maka ọnwa ole na ole, na mberede anyị tụgharịrị uche wee nye mkpebi na ọrụ dị oke mkpa metụtara ntinye nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ụfọdụ n'ime ha echekwala ikike ahụ n'ụzọ dị mma maka ndụ ha na-arụ ọrụ.
Dị ka Board anyị na-ahụ maka ọdịmma nke ndị ọrụ ZT A ma anyị chọrọ ijide n'aka na emere atụmatụ atụmatụ iji obi ọmịiko na obiọma. N'abalị ụnyaahụ, ọ rịọrọ ka m tinye stampụ akwụkwọ akụkọ na nkwupụta ndị ọrụ mana ọ nyebeghị m otu mmelite ọ bụla kemgbe nzukọ nzukọ ikpeazụ anyị gbasara ọganihu na ụzọ okporo ụzọ ndị Board nyere njikwa ịgbaso na ịpịpụta Nkuzi Nkuzi. mmejuputa iwu. Enwere ntuziaka yiri nke ahụ site na Board na ọfịs gị na Medicallọ Ahụike nke Dr. Karikoga Kaseke mana o doro anya na usoro nke 17.1 na ịhọpụta ikike maka onye isi oche (dabere na nkwado nke Minista) bụ Board, ọ bụghị Onye Ozi ma ọ bụ inetlọ.
Anyị guzobere Team Tourism iji mepụta usoro nhazi maka ịnagide nsogbu ụlọ ọrụ ịpị. Ejiri m onye na-eme ihe omume CE guzobe nzukọ iji tụgharịa uche na mbupute ọpụpụ na ọdụ ụgbọ elu mba Harare ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu Kariba. Enyere m aha ya nke ndị isi ụlọ ọrụ dị iche iche ndị m gwara onwe m ma na-etinyekwa aka na ịkwado ụzọ ahụ. Ọ gwaghị m otu ugboro na arịrịọ ahụ n'agbanyeghị ọtụtụ ihe ncheta. N'oge na-adịbeghị anya, Onye otu Board, Maazị Blessing Munyenyiwa nyere anyị ebe mgbakọ na Hwange iji jide Teamlọ Ọrụ Njegharị ọzọ. Anyị kparịtara ụka banyere okwu a ogologo oge na bọọdụ ikpeazụ anyị wee kwenye na isiokwu maka njem nlegharị anya nke ndị njem ga-abụ iche echiche banyere imepụta okporo ụzọ njem nlegharị anya na mmiri Zambezi, nke kpuchiri Kariba, Victoria Falls na Hwange.
Iji maa atụ, ụtụ isi na ihe mkpali ndị ọzọ gọọmentị nwere ike ịnye ndị nwere ike itinye ego iji dọta ego na paseeji a? Anyị nyere ndị na-eme ihe CE na njikwa ya ọrụ ịhazi ịlaghachi na ọ dịtụbeghị mgbe ọ kọghachitere ndị Board na ya. Nsogbu bụ isi dị ùgwù Mịnịsta na-asọpụrụ bụ na Acting CE na-eche na ọ ga-aza ajụjụ ma zaa gị ajụjụ ọ bụghị Board. O degaara m akwụkwọ na-ekwupụta na njikwa a ga-aza ajụjụ maka Mịnịsta ahụ, nke megidere ndokwa nke ZTA Act dịka m kwuru na mbụ.
Enwere m ike iji nkwanye ugwu gosipụta na nsogbu ndị a ga-adịgide na ndị Board a na ndị ga-abịa n'ọdịnihu ma ọ bụrụhaala na ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ / ndị nwe obodo nwere ngalaba nke ha nke ị họpụtara n'ụzọ dị ịtụnanya?
Kọmitii ZTA bụ Kọmitii Na-abụghị Onye Ọrụ (yabụ, ọ bụghị Kọmitii na-arụ ọrụ) ma nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma ma rụpụta ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ọ nwere mmekọrịta mmekọrịta siri ike na CE na njikwa. Zọ kachasị dị irè iji nye ndị ZTA ikike bụ iji hụ na ndị isi ahụ ghọtara nke ọma na ha na-akọ na Board ma ọ bụghị Mịnịsta.
Ka m kelee gị Mịnịsta na-akwanyere ugwu maka ịhọpụta m n'ọnọdụ a ijere ọmarịcha obodo a anyị niile hụrụ n'anya.
Aga m aga n'ihu na-eje ozi n'udo maka abamuru nke nnukwu Zimbabwe anyị mara mma.